चार अपाङ्गकी बृद्धा आमा ! (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौं — चार जना अपांग सन्तानलाई हुर्काउनु कति कठिन थियो होला ? यो प्रश्नले ७० बर्षीय केशरी थामी मौन भईन्, आँखाभरि आँशु पारिन् । यी बृद्ध आमालाई यो प्रश्न आजभोली कसैले नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । श्रीमानको निधनले पिरलिएकी उनले आफ्नो चार असक्त सन्तानलाई हुर्काउन कति कठिन् भोगिन् हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ !
‘नानि मैले यो गाउँमा ५ रुपैयाँ पैसा पनि सापटी पाउन छोडिसकेकी थिए ।’ उनले भनिन् — ‘मलाई लाग्दैन थियो कि मान्छेमा भगवान हुन्छ । तर, आज सावित भएको छ, भगवान मान्छेमै हुन्छ ।’
भक्कानिदै नाम लिईन् — ”दिपक नेपाली, र माया थामी यी नानीहरुलाई मैले के भनुम, भन्नै सक्दिन…. अनि हामीलाई माया गरेर यति धेरै रकम मेरा सन्तानहरुको लागि पठाईदिनु भयो, अरुको देशमा दुःख गरेर जोगाएर हामीलाई सहयोग गर्नु भयो तपाईहरु नै हो भगवान….”
उनको आँशु रोकिएको थिएन । तर पनि उनी हाँस्नु खोजिरहेकी थिईन… सायद आज बर्षौपछि परिवारमा बेग्लै खुशि पलाएको छ । उनीहरुलाई अब कसैको ऋण छैन, ऋणबाटमुक्त भएका छन् ।
कलाकार माया थामीले देशविदेशबाट एकै परिवारका चार जना अपाँगहरुको लागि उठेको सहयोग रकमबारे राजधानीमै पत्रकारसम्मेलन मार्फत जानकारी गराई सकेकी थिईन ।
तर, उनलाई यतिले चित्त बुझेन, त्यसैले यी चार जना अशक्त परिवारलाई लिएरै उनीहरुको गाउँ गुल्मि नरम पुगिन् । चानचुने कुरा थिएन, चार चार जना अपांग परिवारलाई काठमाडौंको कोठामा लिएर राख्नु, कार्यक्रम गराउनु, अनि फेरि उनीहरुकै घरमा पुर्याउनु…. मायाकै पहलमा उठेको रकम गाउँको स्थानीय दाजुभाई, बुद्धिजिबि, शिक्षक, र वडासदस्यसहितको रोहबरमा केहि पैसा चार जना अपांगहरुको नाममा खोलिएको बैंक खातामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । परिवारलाई लागेको सम्पुर्ण ऋण चुक्ता गरिएको छ भने बाँकि केहि रकम परिवारको खर्चको लागि राखिएको छ । अहिलेसम्म उनीहरुलाई लगभग ८ लाख सहयोग रकम उठिसकेको छ ।
केशरीको कान्छो छोरा अब गाउँमै सामान्य खाजाघर खोलेर बस्ने ब्यवस्था गरिरहेका छन् भने छोरी देविमाया पनि कष्मेटिक पसल गर्ने शुरमा छिन् । दुःखको कुरा माईलो छोराको खुट्टा अलिक नाजुक छ, उनी बस्न मात्रै सक्छन् जेठो छोरा जस्तो यताउता घस्रिएर हिड्न पनि सक्दैनन्…